Zotra nasionaly sy rezionaly :: Hametrahana fitaovana fanarahan-dia na GPS ihany koa ny taksiborosy • AoRaha
Hitarina amin’ireo fiara fitaterana amin’ny zotra nasionaly sy rezionaly ny fametrahana an’ilay fitaovana fanarahan-dia na GPS. Ireo taksiborosy manao ny zotram-pitaterana amin’ny lalam-pirenena faharoa (RN2) sy ny lalam-pirenena fahadimy (RN5) no hanombohana azy, amin’ny faran’ny volana septambra ho avy izao.
Hahafahana manara-maso ny hafainganam-pandeha sy ny toerana misy ary famantarana raha niharan-doza ny fiara no nandraisana izao fepetra izao. « Teknôlôjia efa maneran-tany ny fametrahana GPS amin’ny fiara fitaterana. Voaara-maso tsara ny lafiny fifamoivoizana ka hihena ny loza haterany. Misy famerana ny hafainganam-pandeha amin’ity fitaovana ity. Vao mandeha mafy ny fiara dia misy fanairana maneno », hoy ny avy ao amin’ny minisiteran’ny Fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro, nandritra ny fihaonana tamin’ny mpitatitra sy ny tompona kaoperativa, afak’omaly.
Etsy an-kilany, nanambara ireo mpitatitra fa tsy mandà raha mikasika ny fanatsarana ny fitaterana. Mbola hisy ny fanandramana ka aorian’izay vao afaka handrefy ny tombony sy ny lesoka amin’ny fampiasana an’io fitaovana io.
Hahazo tombony amin’ny fampiasana an’ity fitaovana fanarahan-dia ity ny tompona fiara na ny mpanjifa. Hahatoky ny ny mpitatitra azy amin’izay iretsy farany satria ho azo antoka ny diany.
Fantatra fa amin’ny 22 septambra ho avy izao kosa no hanombohan’ny fametrahana ny GPS amin’ireo taksibe amin’ny zotra D manao ny fitaterana mampitohy an’i Vassacos amin’Ivato.
Faharatsian’ny toetrandro :: Hihamafy sy mety hiova isan-taona ny fisehon’ny rivo-doza